Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - Brick Fanatics
20 / 07 / 2021 03 / 08 / 2021 Dimitri 416 Views စာ0မှတ်ချက် 10181 Eiffel မျှော်စင်, 75159 မရဏစတား, 76005 Spider-Man: နေ့စဉ် Bugle Showdown, 76178 နေ့စဉ် Bugle, Amber Grant, မေမေအန်တီ, ဘင်ဥရစ်, Bernie, ဘက်တီ Brant, ကြောင်နက်, ဓါးရွက်, ရက်စက်စွာသတ်ဖြတ်ခြင်း, City, နေ့စဉ်အမှား, Daredevil, ဆရာဝန် Octopus, Firestar, Ghost ပင့်ကူ, အစိမ်းရောင် Goblin, Gwen Stacy, ဂျေယောန Jameson, Lego, Lego CIty, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, LEGO.com, Marvel, မိုင် Morales, သေးသေးလေး, နက်နဲသောအရာ, ပတေရုသက Parker, reviews, ရော်ဘီ Robertson က, Ron Barney, ဆမ် Raimi, Sandman, ပင့်ကူဟမ်း, Spider-Man, Star Wars, အဆိုပါ Amazing Spider-Man, အဆိုပါ LEGO Group, အပြစ်ပေးသူ, အဆိပ်
76178 နေ့စဉ် Bugle အကြီးဆုံးအဖြစ်အလေးချိန် Lego Marvel ပုံမှန်အားဖြင့်ပရိသတ်များနှင့်ပန်ကာ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုယူဆောင်လာသည်။ သို့သော်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပရိတ်သတ်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက်၎င်းသည်အလွန်မြင့်မားသောတည်ဆောက်မှုတွင်လုံလောက်သည်ထက်ပိုပေးသည်။Marvel ပရိတ်သတ်တွေ) လည်းပျော်ရွှင်။
နယူးယောက်မြို့တော် Daily Bugle ကိုရိုက်ထည့်ပါ Cityနာမည်အကြီးဆုံးသတင်းစာ။ အဆိုပါ Amazing အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးအသွင်အပြင်အောင်ကတည်းက Spider-Man ၁၉၆၃ ခုနှစ်နံပါတ် ၁ သည် Daily Bugle သည်ခိုင်မာသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည် Marvel ရုပ်ပြ၊ ရုပ်ရှင်၊ တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းများပင်ဖြစ်သည်။
အဆောက်အ ဦး ၏ဒီဇိုင်းသည်ဆယ်စုနှစ်များတစ်လျှောက်အတော်လေးဆင်တူနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ Sam Raimi ၏ပုံစံသာဖြစ်သည် Spider-Man trilogy ပာတည်ရှိကြည့်ထံမှသွေဖည်။ မျက်မှောက်ခေတ်မိုးမျှော်တိုက်များ၏ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာလှပမှုကြောင့်အကြီးအကျယ်ငှားရမ်းထားသည့်အဆောက်အအုံသည် ၄၆ ထပ်အမြင့် ရှိ၍ သတင်းစာ၏အမည်ကိုဖော်ပြထားသောပေ ၃၀ အက္ခရာများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။
မီဒီယာပုံစံအမျိုးမျိုးတွင်ထင်ရှားကျော်ကြားမှုပေါင်း ၁,၂၆၆ ခုကျော်ရှိပြီး၎င်းသည်အဆောက်အအုံအတွင်း၌တည်ရှိပြီးအလွန်အရေးကြီးသောအဆောက်အအုံတစ်ခုဖြစ်သည် Marvel စကြဝာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာနဲ့အမျှအဲဒါကိုပေါ်လာတာကိုလေ့လာရတာအံ့အားသင့်စရာကောင်းလာပါလိမ့်မယ် Lego တစ်ချိန်ကပုံစံ - 2013 ခုနှစ် 76005 နှင့်သေးငယ်တဲ့အစု၌ Spider-Man: နေ့စဉ် Bugle Showdown ။ The Lego သို့သော်အုပ်စုသည်ထိုလူမပါဝင်ဘဲရှိနေခြင်းအတွက်အစားထိုးထားသည်ထက်ပိုသည် 76178 နေ့စဉ် Bugle.
အပိုင်းအစ ၃၇၇၂ ကို ၀ ယ်ယူလျှင်၎င်းသည်အကြီးဆုံးဖြစ်သည် Lego Marvel ဖြန့်ချိခဲ့ဖူးသမျှပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် (၂၅) ခုသောထူးခြားသောသရုပ်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ ၁၆ ခုသည် Punisher, Daredevil နှင့် Blade အပါအ ၀ င်အထူးသီးသန့်ဖြစ်သည်။ Lego minifigures ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့) ။
ဒီဇိုင်းသည် modular တည်ဆောက်ခြင်းနည်းစနစ်များနှင့်စတိုင်လ်များမှလှုံ့ဆော်မှုကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရသော်လည်းရုပ်ပြစာအုပ်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြင့်တင်ဆက်ထားသည်။ သူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းများသည်အဆောက်အ ဦး ၏အပြင်ပန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပြန့်ကျဲလျက်ရှိသည်။art, နှင့်နေရာတိုင်းမှာတော်တော်များများသင်ကြည့်ရှုအရေးယူမှုအချို့မျိုးဖြစ်ပျက်မှုရှိသေး၏။
၎င်းသည်ကြီးမားပြီးစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းသင်၏အချိန်သည်ထိုက်တန်သလော၊ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာသင်ကြိုးစားရရှိသောငွေများနှင့်ထိုက်တန်သလား။
theme: Lego Marvel အမည်သတ်မှတ်မည် - 76178 နေ့စဉ် Bugle ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 274.99 / $ 299.99 / € 299.99 အပိုင်းပိုင်း: 3,772 အသေးစားပုံများ: 25
Daily Bugle အဆောက်အအုံ၏မည်သည့်အချက်ကိုမှုတ်သွင်းသည်ကိုအတိအကျသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည် Lego ထား ၎င်းသည်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးကိုပေါင်းစပ်ခြင်းထက်တိကျသောပုံစံတစ်ခု၏တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခြင်းနှင့်တူသည်။ သေချာတာကတော့အဲဒါတစ်ခုရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါ Lego မိုးမျှော်တိုက်။
ဆိုလိုသည်မှာပထမတစ်ချက်မှာတည်ဆောက်မှုသည်၎င်းသည်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ခြင်းနှင့်သာမန်ဖြစ်ခြင်းတို့နှင့်တူသည် - မိုးမျှော်တိုက်များသည်သူတို့၏သဘောသဘာဝအရဒီဇိုင်းတွင်တူညီကြသည် - ဤမော်ဒယ်သည်တူညီသောမီးခိုးရောင်ကြမ်းပြင်လေးခုပါရှိပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းသောရပ်နေသည်။ 82cm (ကဒုတိယအမြင့်ဆုံးအောင်) Lego 10181 Eiffel မျှော်စင်နောက်ကွယ်မှအားလုံးအချိန် set ကို) ။ သို့သော်တည်ဆောက်မှုအတွေ့အကြုံကပျင်းစရာကောင်းပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူး 76178 နေ့စဉ် Bugle ဆောက်လုပ်ဖို့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်၏။
modular အဆောက်အအုံများကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောအုတ်ကြွပ်များကို 32 × 32 baseplate တွင်နေရာချကာကျောက်ခင်းလမ်း၊ leyရိယာများ၊ ဝင်ပေါက်နှင့်မြေညီထပ်များအတွက်areasရိယာများကိုခွဲခြားထားသည်။ ကြွေပြားများအလွန်ထိတွေ့နိုင်သောဖြစ်ကြသည် Lego နှင့်အတူတည်ဆောက်ရန်အပိုင်းပိုင်း, ထိုသို့အလွန်ပျော်စရာ st စေသည်art။ baseplate ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ၁ × ၂ ရှိသည် နည်းပညာ ခွင့်ပြု, အုတ် 76178 နေ့စဉ် Bugle မည်သည့်အရာနှင့်မဆို modular အဆောက်အအုံများ (သို့) modular building-inspired set နှင့်ချိတ်ဆက်ရန် 80107 နွေ ဦး Lantern ပွဲတော် နှင့် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ်).
မိုးမျှော်တိုက်ကိုအထပ်လေးထပ်ခွဲထားသည်။ မြေညီထပ်မှာ area ည့်ခံနေရာဖြစ်သည်။ ပထမအထပ်မှာအလုပ်များပြီးစည်ကားနေသည့်သတင်းခန်းဖြစ်သည်။ ဒုတိယတစ်ခုမှာ Peter Parker ၏ရုံးခန်းနှင့်ကပ်လျက်စတိုးဆိုင်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအထပ်မှာစာစောင်၏အယ်ဒီတာဂျေယောနဂျိမ်းဆန်၏အိမ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယထပ်များသည်သေးငယ်သောကြောင့်အနည်းငယ်ထိခိုက်သည်။ သူတို့ကပိုကြီးတဲ့toရိယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် claustrophobic အနည်းငယ်ခံစားရသည်။ အရွယ်အစားကြောင့်အသေးစိတ်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်မပြုပါ။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကြမ်းပြင်လေးခုစလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်တည်ဆောက်မှုသည်အလွန်အထင်ကြီးလေးစားမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာအာရုံစိုက်ဖို့အလုံအလောက်ပုဒ်မခွဲခွဲများနဲ့ဘေးထွက်ဆောက်တွေရှိတယ်၊ သူတို့ဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးစရာလို့မခံစားရဘဲ၊ မိုးမျှော်တိုက်ရဲ့အပြင်ပိုင်းအပိုင်းတွေဆောက်တဲ့အခါတိုင်းအကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့နယ်မြေကိုပြန်သွားတာနဲ့တူတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကြမ်းပြင်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုလည်းတကယ်မှုတ်သွင်းဘေးထွက်တည်ဆောက်ပါဝင်သည်။ နားခန်းတွင်အရောင်းစက်နှင့် ၄ × ၄ မက်ကာရိုနီယမ်အုတ်ကြွပ်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ist ည့်ကြို၏စားပွဲခုံတွင်ရှိသည်။ စားပွဲခုံ၊ ကော်ဖီ percolator (လက်ကိုင်တစ်ခုအတွက်အနက်ရောင်ဘားကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သည်) နှင့်သတင်းစာစားပွဲတွင်တွေ့နိုင်သောရေအေးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်သည့်တီထွင်မှုအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ပေပါကင်၏စားပွဲဘေးတွင်အဖုံးအဖြစ်ဘားလက်ကိုင် ၁ × ၂ ပြားကို အသုံးပြု၍ မိတ္တူကူးသည့် partအသုံးပြုမှု။
အတွင်းပိုင်းအပိုင်းတစ်ခုစီကိုကြီးမားသော panel တစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းများကိုလွယ်ကူစွာဖော်ပြရန်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ အပြင်ပန်းတစ်ခုစီတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပုဒ်မခွဲခွဲများရှိပြီးထပ်တလဲလဲပြောခြင်း၏ခံစားချက်ကိုထပ်မံကန့်သတ်ထားသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကဒေါက်တာ Octopus နှင့်ခရိုနီများမှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင်သတင်းများထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးနောက်သတင်းများထုတ်လွှင့်သော DB News တွင်ဂျေဂျောန်ဂျိမ်းစ်ဆန်တင်ပြသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းများ (စတစ်ကာအဖြစ်စတစ်ကာများ) ပါ ၀ င်သည်။ ငါတို့မြင်တဲ့အခါငါတို့ယုံကြည်လိမ့်မယ်) ။
ဤရုပ်မြင်သံကြားပုံစံဂရပ်ဖစ်များကိုကြမ်းခင်းတိုင်းတွင်တီဗွီဖန်သားပြင်များနှင့်အတူဆောက်လုပ်ရေး၏ကျန်တစ်လျှောက်လုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ ည့်ခံပွဲ၏ထုတ်လွှင့်မှုအသစ်တွင်ကြက်သွန်ဖြူရှားပါးမှုအလယ်၌မီးရထားလမ်းရှိမြေအောက်ရထားပေါ်တွင်ပြောက်နေသည်ဟုသတိပေးလိုက်သည်။ ကံကောင်းတာက Blade ကို set ရဲ့လူကြိုက်များတဲ့စူပါဟီးရိုးစစ်တပ်ထဲမှာထည့်သွင်းထားတာကြောင့်ဒီပြoneနာကိုရှောင်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။
ပြင်ပအခန်းများ၏အဓိကအရာမှာဒုတိယထပ်တွင်ပေါက်ကွဲခဲ့သည့်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပြီး Green Goblin သည် Goblin Glider ပေါ်တွင်ထိုးဖောက်နေသည် (ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုမစွန့်လွှတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်) ။ တူညီတဲ့ p ကိုအသုံးပြုခြင်းartအခြားအထပ်များပါ ၀ င်သောဤအရာများသည်မိုးမျှော်တိုက်၏အပြင်ဘက်တွင်ကပ်နေသောဘောလုံးနှင့် socket ပတ္တာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဤခွဲထွက်ထားသောဤအပိုင်းများသည်လူဆိုးဂိုဏ်းသည်တဖြည်းဖြည်းကွဲထွက်သွားပြီးအဓိပ္ပာယ်ကိုပါးနပ်စွာဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်အလွန်တက်ကြွ။ လှုပ်ရှားမှုအထုပ်အထားကိုပြနိုင်သည်။ ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကွာဟချက်ကိုဖြတ်ရန်အလုံအလောက်အပိုင်းအစများအတိအကျရှိသည်။ အကယ်၍ သင်ကသာမန်အဆောက်အအုံတစ်ခုအဖြစ်တပ်ဆင်လိုပါက။
တည်ဆောက်မှုသည်စတုတ္ထထပ်သို့ရောက်သောအခါထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခြင်းသည်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပေါ်စေသည်art အထူးသဖြင့်အခြားပြတင်းပေါက်တိုင် ၄၀ နှင့်တံခါးရထားလမ်းများပါသော ၁၆ ၁ × ၂ ပြားနှင့်အတူရင်ဆိုင်ရသောအခါအထူးသဖြင့်အတူတကွထားရန်။ ၎င်းသည်အစုအဝေး၏အရည်အသွေးနှင့်ပျော်ရွင်မှုကိုသက်သေထူသည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးအဆင့်သို့သာလျှင်ထပ်ခါတလဲလဲခံစားလာရပြီးအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးတွင်ကမ်းလှမ်းချက်သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသည့်အတွက်ခွင့်လွှတ်နိုင်သည်။
Spider-Man Web-slinger သည်နယူးယောက်ကိုခေါ်ဆိုသည့်အတွက်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်ထူးခြားစွာဖော်ပြထားသောရုပ်ပြစာအုပ်အနည်းငယ်အနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် City တစ်အိမ်လုံးဖြန်းနေသော Big Apple အကြောင်းရည်ညွှန်းမှုတစ်တန်ရှိတယ် 76178 နေ့စဉ် Bugle။ 'New York Sewer' ဂရပ်ဖစ်ပါသောစတစ်ကာများသည်လမ်းဘေးများ၌အလှဆင်ထားသည်။ နယူးယောက်အမှတ်တရပစ္စည်းများနှင့်အတူသတင်းရပ်တည်ချက်အပြင်မှာတွေ့နိုင်ပါသည်; နေရာအနှံ့အဝါရောင်တက္ကစီမပါဘဲမည်သည့်နယူးယောက်မြင်ကွင်းမှပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ 40468 အဝါရောင်တက္ကစီ။ ပုံသဏ္excellentာန်သည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်။ အသေးစိတ်သည်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သော်လည်းစစ်မှန်သည်။
နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ခေါင်မိုးနှင့်ရေမျှော်စင်ကိုထည့်ပြီးမြင်းနက် hitchings နှင့်မီးခိုးရောင်အာရှပုံစံ ဦး ထုပ်ကိုတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်။ စစ်မှန်သောရှာဖွေနေသည့်ရေဒီယိုအင်တင်နာရှိပြီးအတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ဆို့ရန်တောက်ပသောနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Daily Bugle နိမိတ်လက္ခဏာရှိသည်။ ဒါဟာမယုံနိုင်စရာကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အလွန်ပျော်စရာတည်ဆောက်ခြင်းကိုချွတ်ပြီးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပါက Daily Bugle နိမိတ်လက္ခဏာကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ၎င်းကိုထိပ်ဆုံးသို့ထားခြင်းနှင့်သင်၏လက်ရာကိုနှစ်သက်ခြင်းတို့သည် ၀ မ်းမြောက်စွာဖြင့်၊ Spider-Man's Buggy ။ တည်ဆောက်မှုတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးရုပ်ပြများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်အဆုံးသတ်တော့မည့် damp squib ကဲ့သို့ခံစားရသည်။
အတော်များများမျဉ်းပြိုင်များအကြားရေးဆွဲနိုင်ပါတယ် 76178 နေ့စဉ် Bugle နှင့်အစဉ်အလာ modular အဆောက်အအုံများ၊ အဆောက်အ ဦး များတည်ဆောက်ပုံမှအထပ်တစ်ခုချင်းစီကိုတည်ဆောက်ပုံနှင့် ၁ x ၂ ရှိသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ နည်းပညာ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်အုတ်ခဲများကအခြား modular အစုံများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည် - သို့သော်ဤမော်ဒယ်ကိုခွဲခြားလိုက်သောအရာမှာ Daily Bugle ကိုရုပ်ပြစာအုပ်လောကတွင်အခိုင်အမာနေရာချထားသောလုပ်ဆောင်မှုထုပ်ပိုးထားသောအင်္ဂါရပ်များဖြစ်သည်။
အစိမ်းရောင် Goblin ဖြတ်သန်းသောwindowရာပြတင်းပေါက်; reception ည့်ခံareaရိယာ၌တစ် ဦး gaping အပေါက်ထွက်ခွာထွက်ဝမ်းခွဲနိုငျသောဘေးထွက်မြို့ရိုး, အဆောက်အ ဦး တစ်လျှောက်ရှိစစ်ပွဲများအလယ်၌အသေးစားဓာတ်ပုံများကိုပြသနိုင်ခြင်းသည်တက်ကြွသောခံစားမှုမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည် (ဥပမာဓာတ်လှေကားဘယ်မှာရှိသလဲ။ ) play အင်္ဂါရပ်များ ပိုမို၍ ရှိသင့်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်ဟုစောဒကတက်နိုင်သည်။ သို့သော်မော်ဒယ်လ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အရာသည်ပုံသေမျက်နှာပြင်အနေနှင့်ပင် - 18+ အများစုအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သုံးစွဲသူများ - ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်စွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ကဖလားပြီးသား 25 minifigures တွင်ပါဝင်သည် 76178 နေ့စဉ် Bugle, နှင့်သူတို့ထဲက 16 သီးသန့်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်အရည်အသွေးနှင့်ဒီဇိုင်းကွဲပြားသည်၊ သို့သော်သရုပ်ဆောင်များအကြားတွင်ပြန့်နှံ့နေသောတကယ့်မီးမောင်းထိုးပြမှုများရှိပါသည်။
ဥပမာ - Punisher, Daredevil နှင့် Blade တို့အားလုံးတွင်ပေါ်လာသည် Lego ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့အပုံစံ။ Daredevil သည် torso နှင့်မျက်နှာနှစ်မျိုးစလုံးတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံနှိပ်ခြင်းများရှိသည်။ Black Panther ၏ headpiece ကိုအနီရောင်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ Blade ၏ကိုယ်ထည်ပုံနှိပ်ခြင်းသည်တောက်ပနေပုံရသော်လည်းခြေထောက်များမျှသာမဟုတ်ဘဲဖြစ်နိုင်သည်။ သူဟာမျက်နှာပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲလာပါတယ်။ အာရုံစိုက်တဲ့စူပါဟီးရိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့သိပ်ပျော်လွန်းနေပါတယ်။
Punisher သည်ပုံသုံးပုံပါသောခြေထောက်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ပုံနှိပ်ထားသောကိုယ်ထည် (ရှေ့နှင့်နောက်) နှင့်မျက်နှာပုံနှိပ်နှစ်ခုတို့ပါဝင်ပြီးဒဏ်ရာရသူများနှင့်ဒေါသထွက်သည့်မျက်နှာသည်ဇာတ်ကောင်ကိုအကောင်းဆုံးကိုက်ညီစေသည်။ သူလည်းတစ် ဦး အတွင်းသရုပ်မှန်၏လိုင်းစကတ်ထားတဲ့နှစ်ခုသေနတ်များနှင့်အတူလက်နက်ပါလာသည် Lego အစုံ ၎င်းသည်အကြောင်းအရာသည်အလွန်အကြမ်းမဖက်သောအကြောင်းအရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူ၏လက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်ထိုင်။ မရသောအရာတစ်ခုရှိသည် Lego။ ၎င်းသည် 18+ အစုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သက်တမ်းတည်ဆောက်မှုအဆင့်အတွက်ထောက်ခံချက်လား၊
အခြားသူရဲကောင်းများမှာ Firestar နှင့် Black Cat (တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူမ၏စိတ်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ လူကြမ်းများသူ) ဖြစ်ပြီး Miles Morales, Ghost Spider နှင့် Spider-Ham တို့ပါ ၀ င်သည်။ Spider-Man ထို့အပြင်သူသည် (သူမရှိဘဲ Daily Bugle မဖြစ်နိုင်ပါ) ၎င်းသည်သူသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းကထွက်ပေါ်လာသောအလွန်ကောင်းမွန်သော minifigure ဗားရှင်းဖြစ်သည် (နောက်ဆုံးတွင်) dual-molded ခြေထောက်များသာရှိသည်။ Peter Parker ကိုလည်းသီးသန့်အမျိုးအစားတစ်ခုအဖြစ်လည်းပါဝင်ပြီး Gwen Stacy နှင့် Aunt May တို့သည်သူနှင့်အတူကုမ္ပဏီကိုဆက်နေရန်ဖြစ်သည်။
လူဆိုးလူဆိုးများကို ဦး ဆောင်။ Venom နှင့် Carnage တို့သည်ခြေထောက်များကိုပထမ ဦး ဆုံးရရှိနိုင်သည် 76173 Spider-Man နှင့် Carnage vs. Ghost Rider, ဒါပေမယ့်နှစ် ဦး စလုံးဒီအစုံမှသူတို့ကိုသီးသန့်အောင်, အသစ်နောက်ဆက်တွဲရှိသည်။ Green Goblin သည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး torso နှင့်ခြေထောက်များကိုအသေးစိတ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအသုံးအနှုန်းနှစ်ခုကိုအားကစားပြုလုပ်သည်။
ဆရာဝန် Octopus ကိုအသစ်ထပ်မံဖြည့်စွက်ပေးထားပြီး၊ artဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသော pose အတွက် iculated ။ သူ့ကိုခေါင်မိုးပေါ်သို့ချည်ထားခြင်းကသူသည်မိုးမျှော်တိုက်ကိုလှိမ့်ချနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရပြီးပြသမှုအပေါ်စိတ်ကူးကြည့်နေသည် လူဆိုးများကိုရှာဖွေခြင်းမှာ Mysterio (အခြားသီးသန့်ဖြစ်သည်) နှင့် Sandman တို့ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သောအလွန်ကောင်းမွန်သောအနုစိတ်အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ သူသည်နယူးယောက်အောက်ပိုင်း မှနေ၍ သူထင်နေသည့်ထင်မြင်ချက်ကိုပေးသောပီပီပြင်ပြင်ဆပ်စည်းဝေးပွဲတွင်ထိုင်နေသည်။ City လမ်းများ။
အဆောက်အ ဦး ကိုယ်နှိုက်ကိုထူထောင်ရန်အတွက် Daily Bugle ၀ န်ထမ်းများဖြစ်သော Amber Grant၊ Ron Barney, Robbie Robertson, Betty Brant နှင့် Ben Urich အပြင် Daily Bugle အယ်ဒီတာ၊ ဂျေယောနဂျိမ်းဆန်လည်းရှိသည်။ ပင့်ကူမြှေးသည်မိမိနှုတ်ကိုဖုံးအုပ်။ နောက်ဆုံး ၁၉၈၈ တွင်တစ်ချိန်ကပေါ်ထွက်လာခဲ့သောအမှန်တကယ်ရုပ်ပြစာအုပ်ဇာတ်ကောင် Bernie သည်တက္ကစီယာဉ်မောင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်သူမျှမဝေးဆိုတဲ့အချက်ကိုထံမှရတဲ့ရှိပါတယ် 76178 နေ့စဉ် Bugle မျှမျှတတကြီးမားကျယ်ပြရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ 75159 မရဏစတား, ကရုတ်တရက်လုံးဝမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်သဘောတူညီချက်နဲ့တူခံစားရ၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောတည်ဆောက်ပုံသည်သင့်အားနာရီများစွာကြာအောင်ထားစေပြီးပြသထားသည့်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်စွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းပြီးအထင်ကြီးစရာကောင်းပြီးမည်သည့်စင်ငယ်ကိုမဆိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။
ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အသေးစားဓာတ်ပုံအချို့၏လိုလားမှုနှင့်သီးသန့်ဖြစ်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ၊ သူတို့၏စျေးကွက်ထဲမှစျေးနှုန်းကိုစဉ်းစားသောအခါအမှန်တကယ်အစုံကိုယ်နှိုက်သည် ပို၍ ကောင်းသည်ဟုထင်ရသည်။ စျေးနှုန်း -piece အချိုးကိုစိတ်ဝင်စားသူများအဘို့, ဒါဟာအလွန်လျောက်ပတ်သော 8p သို့မဟုတ် p နှုန်း 8 at မှာအလုပ်ဖြစ်တယ်art.
ဤသည်ကားနာရီနှင့်နာရီကိုပင်ဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဤသည်ငယ်ရွယ်သောပရိသတ်များအတွက်အကျိုးရှိစေမည်မှာသေချာသည်။ သို့မဟုတ်ပါကထိုင်ခုံမှထိုင်။ ဤကိုလေးစားလိုသောသက်ကြီးရွယ်အိုပရိသတ်များထံယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ marvel of Lego ဆောက်လုပ်ရေး။ လိုင်စင်ပါသောဤစျေးနှုန်းကိုခိုးယူခြင်းဟုယူမှတ်လေ့မရှိကြပါ၊ သို့သော်ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်၊ 76178 နေ့စဉ် Bugle.
76178 နေ့စဉ် Bugle လုပ်တယ် Marvel ဘာလဲ 75159 မရဏစတား ၏ပရိတ်သတ်များမှကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Star Warsအလွန်များပြားလှသည့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်အသေးစားပုံသဏ္fullာန်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောplaysရာမကစားနည်းတစ်ခု။ အဆောက်အအုံတော်တော်များများနဲ့ပြည့်နေတယ် Spider-Man သငျသညျလိုချင်သူရဲကောင်းနှင့်လူကြမ်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ထင်ရှားတဲ့ချန်လှပ်မှုအချို့ရှိတယ် (ဇာတ်ကောင် ၅၀၀ ကျော် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များကိုအပြီးသတ်မစဉ်းစားမီ) ။ ဇာတ်ကောင်များနှင့်အတူပါ ၀ င်သောဇာတ်ကောင်များသည်လှပသည်။ နောင်လာမည့်နှစ်များတွင်သီးသန့်အသေးစားရုပ်ပုံများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းမည်မှာသေချာသည်။
တည်ဆောက်ပုံသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပျော်စရာကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမော်ဒယ်မှာကြည့်ရမည့်တကယ့်ကိုပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည်။ grayရာမမီးခိုးရောင်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးတစ်ခု၏အထပ် ၄ ထပ်နီးပါးကိုဆောက်လုပ်ရန်အလွန်ပျော်စရာကောင်းမည်ဟုမည်သူတွေးထင်ခဲ့ဖူးသနည်း။ မှန်ပါသည်၊ အဆောက်အ ဦး ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောအသေးစားပုံများနှင့်ပြသခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်၊ မော်ကွန်းတိုက်ပွဲ၏အေးခဲနေသောလျှပ်တစ်ပြက်မြင်ကွင်းကိုသဘောပေါက်စေသည်။ ဒါ့အပြင်ဒီမော်ဒယ်ကိုလည်းပုံမှန်မိုးမျှော်တိုက်နဲ့တူအောင်ပုံစံပြန်တပ်လို့ရပြီးမော်ဂျူလာစုဆောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Lego CITY သင်ပြသရန်ရှိကောင်းတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊ အခြားကြီးမားသောအစုံအလင်များသည်ရိုးရှင်းစွာမပေးနိုင်သည့်ဘက်စုံသုံးမှုကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
ဘို့ Marvel ပရိတ်သတ်တွေဒီဟာကမဖြစ်မနေဝယ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏အတိုင်းအတာသည်အလွန်အင်မတန်မှကြီးမားပြီးတစ်ချိန်ကတည်ဆောက်ခဲ့သောကြောင့်ကြည့်ခြင်းသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာစျေးကြီးပေမယ့်အရာအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသောအခါသူကအလွန်ကောင်းသောတန်ဖိုးကိုကဲ့သို့ခံစားရနှင့် st ထံမှပျော်စရာအတွေ့အကြုံကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်art ပီးဆုံးရနျ။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး 76178 နေ့စဉ် Bugle မှ LEGO.com ငါတို့သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
ဆောက်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle?
တစ် ဦး ချင်းအိတ် ၃၆ ခုပါပါတယ် 76178 နေ့စဉ် Bugleသူတို့သည်တည်ဆောက်ရန် ၁၁ နာရီခန့်အချိန်ယူရသည်။
ဘယ်နှစ်ယောက်အပိုင်းပိုင်း၌ရှိကြ၏ Lego Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle?
76178 နေ့စဉ် Bugle အပိုင်း ၃,၇၇၂ လုံးပါဝင်ပြီး၎င်းကိုအကြီးဆုံးဖြစ်သည် Marvel အစဉ်အဆက်ဖြန့်ချိ set ကို။ ၎င်းသည် Daily Bugle ကိုဒုတိယအကြိမ်ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၏ 2013 Daily Bugle Showdown တွင် ၃,၂၉၆ ပိုနည်းသောအပိုင်းအစများပါ ၀ င်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Marvel 76178 နေ့စဉ် Bugle?
76178 နေ့စဉ် Bugle အကျယ် ၂၇ စင်တီမီတာနှင့်အနက် ၂၇ စင်တီမီတာရှိသော 32x 32 base ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည် Lego 10181 Eiffel Tower ၏နောက်ကွယ်ရှိအချိန်အားလုံး၏စုစုပေါင်းသည် ၈၂ စင်တီမီတာမြင့်သည်။
ဘယ်လောက်မ Lego Marvel 76178 Daily Bugle ကုန်ကျသလား
76178 နေ့စဉ် Bugle စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်မှာဝယ်ယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com ယူကေတွင်ပေါင် ၂၇၄.၉၉၊ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၂၉၉.၉၉ နှင့်ဥရောပမှယူရို ၂၉၉.၉၉ မှဖြစ်သည်။
← Lego Star Wars ထုံးစံ Jedi Bob parts စာရင်း
LEGO ကိုအရင်ကြည့်ပါ Marvel တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ…? 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man →